Doon la buufin karo ayaa ku degtay meel u dhow jasiiradaha Canary, 52 qof ayaa dhimatay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Doon la buufin karo ayaa ku degtay meel u dhow jasiiradaha Canary, 52 qof ayaa dhimatay
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • News • Ammaanka • Wararka Spain • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Kaliya hal qof ayaa ka badbaaday musiibadii doontii Afrika ee la buufin jiray meel u dhow jasiiradaha Spain.
Doontii muhaajiriinta ahayd ee ku degtay jasiiradaha Canary.
Qof ka badbaaday kaligiis ayaa diyaarad loo qaaday isbitaal.
In ka badan 50 qof ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen.
Sida laga soo xigtay Adeegga Badbaadinta Badaha ee Spain, in ka badan 50 qof ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen ka dib markii dooni laga buuxiyey oo ka timid Afrika ay ku qalibmatay Badweynta Atlantic meel qiyaastii 135 mayl u jirta Jasiiradaha Canary ee Spain.
Haweeney 30 jir ah ayaa kaligeed ka badbaaday doontii degtay, taasoo ka tagtay Afrika toddobaad ka hor iyadoo sidday 53 muhaajiriin iyo qaxooti ah.
Markab ganacsi ayaa goor sii horraysay ku arkay markabka koonfurta ka xiga Canary Islands iyo heeganka adeegyada gurmadka ee Isbaanishka.
Haweeneyda ayaa ku dhegganayd doontii degtay iyada iyo nin dhintay iyo haweeney dhintay oo agteeda joogtay, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan shaqaalaha gurmadka.
Waxay u sheegtay samatabbixiyeyaasha in doontii la buufin lahaa ay ka soo duushay xeebta Galbeedka Saxaraha iyo in rakaabku ay ka yimaadeen Ivory Coast.
Haweeneyda ayaa diyaarad lagu qaaday isbitaal ku yaal Las Palmas, jasiiradda Gran Canaria.
Dhimashada muhaajiriinta iyo qaxootigu waxay ku badan yihiin aag ka mid ah Badweynta Atlantikada ee kala sooca Xeebta Galbeed ee Afrika iyo Jasiiradaha Canary ee Spain laakiin burburka maraakiibta ee waddada way adag tahay in la xaqiijiyo, inta badan meydadka dhibbanayaashana marna lama soo kabsado.
Ugu yaraan 250 qof ayaa ku dhintay waddada aadeysa jasiiradaha Spain lixda bilood ee ugu horreysa sanadka 2021, sida ay sheegtay hay’adda socdaalka ee Qaramada Midoobay.